Eyona ilungele i-iPad Pro 11 2021 ye-3rd Generation Case Funda ngePensile yokuGcina ipeyinti ye-iPad Pro 11 2020 2018 yoMvelisi kunye neFektri | Abahambahambayo
Eli tyala liyahambelana nePad Pro Pro 11 2021 3rd Generation, kwaye zombini iPad pro 11 2nd generation 2020, ipad pro 11 2018.
IPad pro 11 Isizukulwane sesibini 2020 Imodeli: A2228, A2068, A2230, A2231
IPad pro 11 2018 Imodeli: A2013, A1934, A1980, A1979
Ipensile eyakhelwe ngaphakathi
Iyahambelana nepensile eyahlukeneyo kunye nePensile ye-1/2 yesizukulwane kunye nezixhobo. Ipensile eyakhiweyo inika indawo ekhuselekileyo yokugcina indawo yokugcina ipensile yakho.
Xhasa ipensile yakho yeapile ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngaxeshanye.
Ukuvuka / ukulala ngobuchule
Ityala livumela isixhobo sakho ukuba sivuke kwangoko kwaye silale xa kuvulwa naxa kuvalwa Xa ipad ivuliwe, unokuvula ii -apps ngemizuzwana. Ukuba ubeka iphasiwedi ukuvula, xa uvula ikhava, kuphela isikrini esiya kukhanya.
Yima Inkxaso yokuma
Ukuma kathathu kwemagneti kuxhasa imo yokujonga ngokufanelekileyo kunye nemo yokubhala ezinzileyo. Ungasifaka ngokulula isiciko kwiindawo ezahlukeneyo ukwenza indawo yokufunda, ukubukela, ukuchwetheza.
Ngeekona i-anti-drop airbag, iya kunciphisa amandla eempembelelo kunye nokunciphisa umonakalo kwizixhobo.
Amacala amane, iilensi kunye nescreen zinoyilo olukhuselayo, ungakhathazeki ukukrwela ipad yakho okanye ukulahla okanye ukungqubeka.
Ukuchongwa ngokuchanekileyo kuko konke ukufikelela kunye namazibuko.
Igobolondo eliguqukayo elingasemva
Luhlala ixesha elide, lukhawuleze lukhuseleke kwaye kulula ukufaka. Isoftware ebuyayo ye-TPU ekhupha uyilo lobushushu inceda ipad yakho ikhuphe ubushushu. Sukuba nexhala lokuba ipad yakho ishushu kakhulu xa udlala imidlalo okanye ubukele iimovie ixesha elide.
Umqolo okhuselekileyo okhuselayo okomeleleyo kunye nomgangatho we-PU wesikhumba. Iimvakalelo ezichukumisayo.
Ingaphakathi le-microfiber elithambileyo ngaphandle kokungena longeza intuthuzelo kunye nolunye ukhuseleko.
Iqinisekisa eyakho ipad entsha vala kufutshane, ukukhusela ithebhulethi yakho kwimikrwelo, umothuko kunye namaqhuma.
Ukuphakama x Ububanzi x Ubunzulu: 253m x 154mm x 15 mm
I-MOQ: 50PCS / isiQinisekiso sombala: FCC, ROHS, GS, RECH, Sgs
Ubukhulu: 11 ”Uyilo: Ityala lepensile elibambayo
Ukupakisha: ingxowa ye-opp Intlawulo: 1.T / T 2.Western Union 3. Paypal
Ixesha lokuhambisa: I-3-5 yeentsuku zokusebenza zomsebenzi
Ukulala / ukuvusa umazibuthe: Ewe Ukuvala umazibuthe: Ewe
Egqithileyo Kwi-Samsung galaxy tab ye-A7 lite 8.7 intshi 2021 yeTafile yeTafile yeCwecwe leMagnetic Slim Folio Isikhumba
Ityala Anti-ukuwa Shockproof for Samsung Way ta ...
Yima ityala lesikhumba le-Samsung galaxy tab a 10 ....